माहामारी बन्दैछ भिटामिन डी को कमी | Hamro Doctor News
माहामारी बन्दैछ भिटामिन डी को कमी
भिटामीन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कम खानेकुराहरुमा मात्र पाईन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरुको उपपाचन (metabolism) का लागि आवश्यक यो भिटामिनको कमि आजकल आम रुपमै देखिन थालेको छ । आन्तरिक रुपमा शरीर भित्रै पनि बन्न सक्ने हुनाले धेरै वैज्ञानिकहरू यसलाई भिटामिन नमानेर हरमोन पनि मान्दछन् ।
प्राकृतिक रुपमा धेरै कम खानेकुरामा भिटामिन डी पाईन्छ । विशेषत समुन्द्रि माछा (टयुना, सालमोन, म्याकारोलको कलेजोमा भिटामिन पाईन्छ । थोरै मात्रामा अन्य जानवरको कलेजो, पनिर, अण्डाको पहेलो भाग र दुधमा पनि भिटामिन डी पाइन्छ । केही च्याउहरुमा पनि थोरै मात्रामा भिटामीन डी मिल्न सक्छ । प्राकृतिक रुपमा धेरै कम तत्वहरुमा भिटामिन डी पाईने भएकाले आजकल दुध, मख्खन, पनिर र तैयारी खानेकुराहरूमा पनि भिटामिन डी मिसाउने ९ायचतषष्भम०गर्न० थालिएको छ ।
को छालाको इपिडर्मिसमा सेभेन–डी–हाईड्रो–कोलेस्टेरोल लाई सूर्यको अट्राभाइलेट किरणले फोटोलाईसीस गरेर कोलेक्याल्सीफेरेल बनाउँदछ । कोले–क्यालिफेरोललाई लीवर एञ्जाईम ले २५– हाइड्रोक्सी–कोले–क्याल्सीफेरेलमा बद्लिदिन्छ र अर्को इञ्जाईमले २५– हाइड्रोक्सी–कोले–क्याल्सीफेरेललाई १,२५ डाइ–हाइड्रोक्सी कोले–क्यालसीफेरेलमा परिवर्तित गरिदिन्छ । १–२५ डाइ–हाइड्रोक्सी–कोेल–क्याल्सिफेरेल भिटामिन डी को सक्रिय रुप हो ।
भिटामिन डी को कामहरु :
१) भिटामिन डी ले आन्द्रामा क्याल्सियम र फस्फोरसको अवशोषणलाई मद्दत पु¥याउँदछ ।
२) क्याल्सियम र फष्फोरस जस्ता तत्वहरुलाई हड्डीमा पु¥याएर अस्थि घनत्वलाई बरकरार राख्न पनि भिटामिन डी को आवश्यकता पर्दछ ।
७) घाउ खटिरा चोटपटक र संक्रामक रोगहरु चाडै निको पार्न मद्दत पु¥याउँदछ ।
८) मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो जस्ता कोमल अड्डहरुको रोगहरुको गम्भिरतालाई घटाएर रोगलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउँदछ ।
९) क्यान्सर प्रतिकार गर्न मद्दत पु¥याउँदछ
कमी भए के के हुन्छ
यि सबै घटनाहरु मुुख्यतः निम्नलिखित लक्षणहरु देख्न सकिन्छ ः
ज्यादा भए के हुन्छ ः
भिटामिन डी कम भएकाहरुले यो कमिलाई पुर्ति गर्न सर्वप्रथम शरीर भित्रै भिटामिन डी बन्ने क्रियालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सूर्यको किरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ । हप्तामा १ वा २ दिन वा महिनामा ५÷७ दिन वा वर्षमा ५०–६० दिन हरेक पल्ट ४५ मि. देखि १ घण्टा सम्म घाममा बसियो भने पनि शरीरलाई चाहिने जति भिटामिन डी शरीर भित्रै बन्न सक्छ । घाममा बस्दा सकभर निवस्त्र भएरै बसेको राम्रो हो । निवस्त्र हुन सम्भव नभए कमसेकम ८०–८५% हिस्सा कपडा विहिन हुन आवश्यक छ ।घाम जति चर्को भयो त्यति नै भिटामिन डी को संश्लेषण ज्यादा हुन्छ तर चर्को घाममा सूर्यको अल्ट्राभाइलेट विकिरणले अन्य अड्ड र छालालाई आघात पु¥याउने हुँदा सकभर बिहानको घाम ताप्न उचित हुन्छ
भिटामिन डी खानाको माध्यम द्धारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । भिटामिन डी को मूख्य प्राकृतिक श्रोत माछा, माछाको तेल, कलेजो, मृगौला, अण्डा जस्ता फलमासु हुन तर मासु आपैmमा स्वस्थकर खाना नभएकाले भिटामिन डी को लागि मासु नखाएर सप्लिमेण्ट लिनु उपयूक्त हुन्छ। आजकल भिटामिन डी मिसाइएको दहि, दुध, तोफु, चिज, पनिर र अन्य खानेकुराहरु पनि पाईन्छ । यो चिल्लो पदार्थमा घुल्ने भिटामिन हो । तसर्थ भिटामिन डी लाई सहि सदुपयोग गर्न स्वस्थकर चिल्लो पदार्थ खानुपर्ने हुन्छ । विशेषतः तैतिय फलफूल, सुख्खा फलफूल र क्रिमयूक्त दुध तथा दुग्ध परिकार आदि खान स्वस्थकर हुन्छ भिटामिन डी युक्त खानेकुराहरुको साथमा क्यालसियमयुक्त खानेकुराहरुको सेवन गर्न पनि अपरिहार्य हुन्छ । दुध र दुग्धजन्य परिकारहरु हरियो सागपात, पालुगो, लट्टे, लुडे, वेथे, च्याउ, सिबी, बोडी, काउली, ब्रोकाउली, चुकन्दर, टमाटर, केरा सुन्तला, सिंघाडा आदिमा प्रसस्त क्याल्सियम पाईन्छ । कोदो, फापर, गहत, मकै, जवार, बाजरा, जूनेलो, सामा, कागुनी चिनो आदिमा पनि प्रशस्त क्यालसियम पाईन्छ ।
व्यायम गरौ÷सक्रिय रहौं
श्रम वा व्यायम गर्ने बानीले शरीरलाई स्फूर्त एवं तन्दुरूस्त बनाइरहन मद्दत गर्दछ । व्यायाम गर्दा नशा नाडीमा रक्त संचार भइरहने हुदा भिटामिन डी लाई कोष कोष सम्म पु¥याएर यसको कार्यलाई पूर्ण गर्न मद्दत पु¥याउदछ । दैनिक ३० मिनेटको व्यायम हर कसैलाई आवश्यक पर्दछ । व्यायम गर्दा एकपल्ट शरीरका सबै जोर्नीहरु चल्नु पनर्,े एकपल्ट सररर पसिना फुट्नु पर्ने र शरीरका भित्री अंगको पनि व्यायम हुनु पर्ने हुन्छ ।
घरेलु उपचार ः
१) बदामको तेल दुधमा मिलाएर खादा पनि यो रोगमा फाइदा पु¥याउँदछ ।
भिटामिन डी को प्रकार
भिटामिन डी म्द्द र म्घ गरि दुई प्रकारका हुन्छन् ।
१) भिटामिन म्द्द लाई अर्गोक्यासिफेरले भनिन्छ । यो मिश्रित आहार वनस्पति आहार र पुरक आहारमा पाइन्छ ।
२) भिटामिन म्द्द लाई कोलेक्याल्सिफेरोल भनिन्छ । यो मिश्रित आहार माछा, मासु, अण्डा, कलेजो आदिमा पाईन्छ । प्राकृतिक रुपमा सूर्यको किरणको उपस्थितमा यो भिटामिनक शरीर भित्रै पनि बन्दछ ।
कम हुने कारणहरु
४) धेरै कालो छालाः छालामा भएको मेलालिन पिगमेण्टले सूर्यको अल्ट्रामाइलेट वी ९ग्ख्द्य० लाई प्रतिरोध गरि भिटामिन बन्न दिदैन ।
१) बोसो भएको माछा÷माछाको तेल
डा. हेमराज कोइराला,
Last modified on 2019-10-30 14:07:51